Site na: KongoLisolona: Ọktoba 4, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
N'ọnwụ nwa eze ahụ, Angelo Soliman ghọrọ valet onye isi na Vienna de Liechtenstein et épousa en 1768 la sœur du futur général Kellerman. N'ịbụ onye natara na ọha mmadụ, kwetara na Viennese Freemasonry, Angelo Soliman gafere Marie-Antoinette wee bụrụ enyi nwanne ya nwoke, bụ King Joseph II.
Mgbe ọ nwụrụ, ndị Viennese naturalist, ndị echiche ịkpa ókè agbụrụ meriri, kpojupụtara ya ma gosipụta ya na ngosi ngosi!
A mụrụ Andrea Aquyar, nwa nwoke nke ndị isi agbụrụ Afro si Uruguay, bụ ohu na Montevideo; N'oge agha obodo, mgbe a kwụsịrị ịgba ohu na Uruguay
Ọkt30 07: 19